laacibfm.com » Liverpool Oo Si Adag Uga Jawaabtay Laacib Uu Jurgen Klopp Jecel Yahay Oo Koox Kale Kasoo Dalbatay
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa albaabada ka xidhatay, si adagna uga jawaabtay dalab kasoo gaadhay kooxda reer Italy ee AS Roma oo doonaysa mid ka mid ah xiddigaha uu tababare Jurgen Klopp doonayo inuu ku dagaal galo qaybta hadhay ee xili ciyaareedkan si uu ugu guuleysan karo horyaalka Premier League.
Liverpool oo xili ciyaareedkii hore ku guuleysatay Champions League, waxay hoggaanka horyaalka Premier League ku haysaa 14 dhibcood oo nadiif ah iyo hal kulan oo ay u hadhsan oo ay kooxaha kusoo xiga ciyaareen, taas oo suurtogelin karta in ay hoggaanka ka dhigto 17 dhibcood dhamaadka bishan marka ay West Ham la ciyaarto.
Kooxda AS Roma oo uu dhaawac halis ahi kasoo gaadhay laacibkeeda Nicolo Zaniolo oo garoomada ka maqnaan doona inta ka hadhay xili ciyaareedka, ayaa waxay ka dalbatay Liverpool laacibka khadka dhexe ee Xherdan Shaqiri oo ay ku doonaysay heshiis amaah ah.
Shaqiri oo ay da’diisu tahay 28 jir, waxa uu xili ciyaareedkan u saftay kooxdiisa 10 kulan oo kaliya, waxaana ragaadiyey dhaawacyo soo noqnoqday oo yareeyey waqtigiisa Anfield, laakiin waxa uu dib ugu soo laabtay kooxda usbuucii hore.
Xherdan Shaqiri ma haysto boos joogto ah, waxaana xaaladdiisa sii xumaynaya saxeexa cusub ee Takumi Minamino oo bishan bilowgeedii ay Liverpool kasoo iibsatay Salzburg, hase yeeshee Jurgen Klopp ma doonayo inuu fasaxo laacibkan oo uu rumaysan yahay inuu qayb weyn ka qaadan doono hammiga kooxda ee ah inay muddo soddon sannadood ah kaddib ku guuleysato horyaalka Premier League.
Xherdan Shaqiri oo sannadkii 2018 ay Liverpool 13 milyan oo Gini kaga soo qaadatay Stoke City waxa si weyn u doonaysa Roma oo rabta inuu u galo booskii Zaniolo, hase yeeshee Liverpool ayaa dalabkooda amaahda ah kaga jawaabtay diidmo degdeg ah.